ALSAADICUUN BILXAQI – ALITIXAAD: Col ku dhac oo cadaw kuu ciidami! - Caasimada Online
Home Maqaalo ALSAADICUUN BILXAQI – ALITIXAAD: Col ku dhac oo cadaw kuu ciidami!
Ka hadalkoodu wuxuu ahaa amakaag iyo anfariir! In ay ka hadlaan ka ma xirna, ee nimanku ma illoobeen wixii ay shalay fareen ama faleen? Bashiir Salaad ma illoobay dagaalkii Gedo iyo wixii dhallinyaro Soomaaliyeed ku halaagmay? Umal ma illoobay dagaalkii lagu qaaday dawladdii Cabdillaahi Yuusuf iyo galaysiintii uu gaalaysiiyey intii ka shaqaynaysay dawladdaa? Sidoo kale, ma illoobay gaalaysiintii maamulka Soomaali Galbeed, isagoo dabcan Itixaad mufti u ahaa, maantanaALSAADICUUN buu gaalaysiin ku haystaa, ma anagaa waalan mise Cadan baa laga heesayaa?